Sidee laysugu daraa shaatiyada qoorta mandarin | Ragga Stylish
Sidee laysugu daraa shaatiyada qoorta mandiina
Fasal yeesho | | nololeedka, fashion
Koolarka loo yaqaan 'mandarin' ayaa u yimid dunida moodada dhawr sano ka hor, laakiin waxay umuuqataa in munaasabadan lagu samaynayo si loo sii joogo, in kasta oo waxa maanta xidhan ee berrito laga yaabo inay duugoobeen, laakiin haddii ay innagu hanuuniyaan nashqadeeyayaasha waawayn, kollarka mandarin waa fashion aad u caan ah waxayna u muuqataa taas sidaas ayey ahaan doontaa muddo dheer. Isku darka qoorta noocan ah ma fududa, maxaa yeelay nama siinayso dheel dheel ah oo na hagi kara bilic ahaan waxaan ku xiran karno ama ku xiran karin shaatiyada noocan ah. Intaas waxaa sii dheer, sidoo kale waa muhiim in la ogaado goorta ay fikrad fiican tahay in la isticmaalo.
Dharkaan waxaa loo sameeyay cimilo kulul, markaa isticmaalkeeda waxaa badanaa la sameyn doonaa xagaaga. Waxay ku habboon tahay markaan tagno ku hawlan hawlo la xiriira biyaha, sida safar doon, ama u lugee xeebta socod. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa bixitaanka habeenkii, inkasta oo uu soo daaho habeenkii, kuleylka uma muuqdo inuu doonayo inuu dhammeeyo bixitaankiisa.
1 Isku dar shaatiyada qoorta mandiarin
1.1 Oo leh jaakad
1.2 Iyada oo cardigan
1.3 Iyadoo Bomber
1.4 Gudaha surwaalka
Isku dar shaatiyada qoorta mandiarin
Oo leh jaakad
Jaakada ayaa had iyo jeer noqon doonta mid ka mid ah dharka sida muuqata ugu muuqda ficil ahaan nooc kasta oo dhar ah, ha ahaato shaatiyada, funaanadaha, jooniska ama surwaalka dharka. Fikrad ahaan, labada dharba na siiya isku midab laakiin leh midabbo kala duwan.
Iyada oo cardigan
Sida jaakada, tan ugu fiican ayaa ah in labada dharba ay wadaagi karaan midab isku mid ah laakiin midabbo kala duwan ah, in kasta oo kaarigan uu na siin karo naqshad qurux badan oo kala duwan, dhammaantood waa inay midab ahaan isku ekaadaan.
Qarax qaraami ah in Waxay noqdeen kuwo moodada dabayaaqadii 80meeyadii, ayaa mar kale ku riyaaqaya da'da dahabiga ah iyada oo ay ugu mahadcelinayaan shaararkeeda mamo. Xaaladdan oo kale, waxay ku habboon tahay iyaga inay ku jiraan midabyo mugdi ah sida madow ama buluug mugdi ah, in kasta oo hooska khafiifka ahi sidoo kale ku habboon yahay hadba midabka shaadhka.
In kasta oo ay u muuqan karto mid fudud, surwaal iyo funaanad maandooriye ah ayaa noqon kara isku-darka ugu fiican goorma waxaan raadineynaa muuqaal caadi ah dhib la'aan badan. Xaaladdan oo kale, in kasta oo funaanadda Mao loogu talo galay in lagu xidho bannaanka surwaalka, haddana waxa lagu gashan karaa gudaha surwaallada laakiin munaasabado naadir ah oo ku xidhan nooca dharka aan isticmaalno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Sidee laysugu daraa shaatiyada qoorta mandiina
Sida loo sameeyo Cirfiid Gin ah oo Qumman
Sida loo eego dherer adigoo si fudud u badalaya qaabka aan u labisano